भोजपुर कोभिड अस्पताललाई प्रवासीसँगै विभिन्न संघ संस्थाको सहयोग - khabarsansar.com
भोजपुर कोभिड अस्पताललाई प्रवासीसँगै विभिन्न संघ संस्थाको सहयोग
भोजपुर, १ साउन । भोजपुर कोभिड अस्पतालको लागि सहयोग जट्ने क्रम बढेको छ । अस्पताललाई सहजरुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो खर्चलाई कटाएर रु. ५१ हजार सहयोग गरेका हुन् । प्रवासमा अभियान चलाएर भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युएई मार्फत अस्पताललाई सहयोग गरेको समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए । त्यस्तै अस्पतालको लागि निर्माण व्यवसायी श्याम श्रेष्ठले रु. एक लाख ८० हजार बराबरको अक्सिजनसहित १० ओटा सिलिन्टर वितरण गरेका छन् । श्रेष्ठले आफु कोभिडको विरामी भएर उपचार गराउँदा अक्सिजनको आवश्यकता धेरै नै रहेको महशुस भएकोले अक्सिजन सहयोग गरेको बताए । यसले कोभिडका विरामीलाई केहि राहत हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै भोजपुर नगरपालिकाले ब्लड बैंक स्थापनाको लागि फ्रिज र नेपाल चिकित्सक संंघले भेन्टिलेटर वितरण गरेको छ । अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग भईरहेको भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने समस्या रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले भने,‘‘ अस्पताललाई आवश्यक मापदण्ड अनुसार निर्माण गरेर यहाँका विरामीलाई बाहिर नपठाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । विभिन्न ठाउँबाट सहयोग पनि जुटिरहेको छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती छ, यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडी बढ्छौँ ।’’
अस्पतालको सञ्चालनको लागि बजार क्षेत्रका व्यवसायी, समाजसेवी, विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि समय सहयोग गर्दै आएका छन् ।
कोभिडका विरामीलाई सहज रुपमा उपचारको व्यवस्था गराउनको लागि काम भइरहेको भोजपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । जसको लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँगै समन्वय गरेर काम भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ । नगरपालिका प्रमुख कैलाश कुमार आलेले भने,‘‘ कोभिड अस्पताललाई व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । अन्य विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ ।’’
जिल्लामा विहिबारसम्म एक हजार १३० जना संक्रमित भएका छन् भने ९६९ जना निको भएर फर्किएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या घट्दै जान थालेपछि जिल्लामा यातयात सेवालाई आजबाट खुल्ला गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्दै समय निर्धारण गरेर सञ्चालनको व्यवस्थापन गरिएको छ ।